RASMI: Garsooraha dhex-dhexaadin doona kulanka El Clasico ee dhex mari doono Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo la shaaciyey – Gool FM
Dajiye October 22, 2020
(Spain) 22 Okt 2020. Xiriirka Kubadda Cagta Spain ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay garsooraha dhex-dhexaadin doona kulanka El Clasico ee dhex mari doono Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo la shaaciyey.
Guddiga garsoorka ee Xiriirka Kubadda Cagta Spain ayaa ku dhawaaqay in garsooraha lagu magacaabo Martinez Munuera uu dhex-dhexaadin doono kulanka El Clasico ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid garoonka Camp Nou Sabtida soo socota, kaasoo qeyb ka ah kulamada horyaalka La Liga.
Martinez Munuera ayaa markii ugu horreysay xirfadiisa garsoornimo dhex-dhexaadin doono kulan El Clasico ah, halka garsooraha VAR loo magacaabay Jose Maria Sanchez Martinez.
Inkastoo Martinez Munuera uu maamuli doono El Clásico markii ugu horeysay, haddana wuxuu khibrad u leeyahay hogaaminta kulamada Barca iyo Real Madrid si gooni gooni ah, maadaama uu soo dhex-dhexaadiyay 24 kulan kooxda Los Blancos ah iyo 21 kulan oo Barca ah.
Real Madrid ayaa guul gaartay 15 kulan, kulamadii ay soo ciyaartay ee uu soo dhex-dhexaadiyay Martinez Munuera, waxayna guuldarro la kulantay 4 jeer, halka ay bar-bardhac gashay 5 kulan oo kale.
Dhinaca kale Barcelona ayaa soo guuleysatay 15 kulan, 21 kulan ay soo ciyaartay uu soo dhex-dhexaadiyay Martinez Munuera, waxaa laga soo adkaatay 3 kulan, waxayna bar-bardhac gashay 3 kulan oo kale.